इन्स्टाग्राममा नीलो डटको मतलब के हो 🥇 फॉलोअर्स ▷ 🥇
इन्स्टाग्राममा निलो डटको मतलब के हो
इन्स्टाग्राम हाल संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक हो। प्लेटफर्म लगातार अपडेटहरू मार्फत जान्छ जुन यसलाई व्यक्तिहरूको मनपर्ने बनाउँदछ। इन्स्टाग्रामका अधिकांश जनताले नेटवर्क दैनिक प्रयोग गर्न स्वीकार्छन्। यी प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो अंश 18 र 29 वर्ष बीचको छ। ठूला व्यक्तित्वहरू, पेशेवर मोडेलहरू, गायकहरू र अधिक धेरै नेटवर्कबाट बाहिर आयो जसले आफ्ना प्रकाशनहरूको साथ ख्याती प्राप्त गरे। यद्यपि त्यहाँ अझै धेरै व्यक्ति छन् जुन अझै पञ्जाटको फाइदा लिन जान्दैनन्। र यसको लगातार अपडेटहरू सहित, धेरै पछाडि छोडिन्छन्। त्यस कारणका लागि आज हामी के हो र कसरी सामाजिक नेटवर्क को नयाँ थप को एक काम गर्दछ वर्णन गर्दछौं। इन्स्टाग्राममा निलो डटको मतलब के हो.
यदि तपाईं भर्खरै इन्स्टाग्राम प्रविष्ट गर्नुभयो भने, तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि प्लेटफर्ममा अब बिभिन्न प्रकारका र अपडेटहरू छन्। इन्स्टाग्राम भित्र सम्पत्ति देखा पर्‍यो। र अब खोज ईन्जिन र इन्स्टाग्राम सिधा भित्र तपाईले नयाँ जोड देखाउनुहुनेछ। निलो थोप्लो तर केइन्स्टाग्राममा निलो डटको मतलब के हो? हामी तपाईंलाई अर्को बताउनेछौं।
इन्स्टाग्राममा निलो थोप्लो के हो?
त्यहाँ दुई प्रकारका निलो डटहरू छन् जुन हामी इन्स्टाग्राम प्लेटफर्ममा फेला पार्न सक्छौं। तर केइन्स्टाग्राममा निलो डटको मतलब के हो? ठिक छ, यसको दुई प्रकारको अर्थ छ। र यो पोइन्ट भएकोमा निर्भर हुन्छ। यो यसको प्लेटफर्ममा नयाँ इन्स्टाग्राम थपहरू मध्ये एक हो। जुन आफ्नो स्थापनादेखि केही परिवर्तनहरू आएको छ, तर, जुन हालका वर्षहरूमा बढेको छ। यति धेरै अपडेटहरूले धेरै पटक प्रयोगकर्तालाई हराउने कारण र उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर बुझ्दैनन्। यस कारणले हामी व्याख्या गर्नेछौं इन्स्टाग्राममा निलो डटको मतलब के हो तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दै, यी हुन्:
इन्स्टाग्राम प्रत्यक्षमा निलो डट
Lo इन्स्टाग्राममा निलो डटको मतलब के हो जुन हामी लाइभमा फेला पार्न सक्छौं, त्यो यो हो कि त्यहाँ नयाँ सन्देश छ जुन यो बिना नै छ। यदि तपाइँ इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, र अर्को प्रयोगकर्ताले तपाइँलाई सन्देश पठाएको छ जुन तपाइँले देख्नु भएको छैन। यसको छेउमा सानो नीलो डट देखा पर्नेछ।
खोज इञ्जिनमा निलो डट
नीलो थोप्ला जुन हामीले खोज इञ्जिनमा फेला पार्न सक्छौं, जब हामी अर्को प्रयोगकर्ताको नाम प्रविष्ट गर्छौं, यसको मतलब यो हो कि योसँग एउटा नयाँ प्रकाशन छ जुन तपाईंले देख्नु भएको छैन। जुन सम्भावित यसको नयाँ एल्गोरिथ्मको कारण ईन्स्टाग्राम भित्रै छ। जहाँ धेरै प्रकाशनहरू प्राय: हराउँदछन्। यस कारणका लागि इन्स्टाग्रामले नयाँ प्रकाशनका बारे प्रयोगकर्तालाई सूचित गर्दछ। प्रयोगकर्ताको छेउमा निलो डटको थपमा, यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ एक नयाँ प्रकाशन छ।
त्यसो भए सामान्य सर्तमा के हुन्छ इन्स्टाग्राममा निलो डटको मतलब के हो केहि नयाँ छ जुन तपाईंले देख्नु भएको छैन, यो पोष्ट वा सन्देश हो। धेरै व्यक्तिहरू प्राय: प्रमाणित मोहरको साथ इन्स्टाग्राम ब्लू डटलाई भ्रमित गर्दछन्। र यी उस्तै हुँदैन।
इन्स्टाग्राममा प्रमाणितको मतलब के हो?
धेरै लगातार नीलो थोप्लाको साथ खोज इञ्जिनमा वा इन्स्टाग्राम प्रत्यक्षमा भेट्टाइएको छापलाई भ्रमित गर्दछन्। तर, सत्य यो हो कि तिनीहरूको बिभिन्न अर्थहरू छन्। जबकि नीलो थोप्लोको अर्थ त्यहाँ केहि नयाँ छ जुन तपाईंले देख्नु भएको छैन, यो सन्देश वा पोष्ट हुनुहोस्। प्रमाणिकरण मोहरको मतलब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई सार्वजनिक आंकडा वा प्रख्यात ग्लोबल ब्रान्डको रूपमा मान्यता दिन्छ।
इन्स्टाग्राम भित्र एक प्रमाणित खाता हुनको लागि, प्लेटफर्मले भनेको छ कि तपाईसँग प्रयोगकर्ता छ जुन ठूलो दर्शकहरूमा पुग्छ। यद्यपि मञ्चले ठूलो श्रोताको बारेमा कुरा गर्ने बेलामा यसले केलाई सन्दर्भ गर्ने कुरा भनेको छैन। धेरै वर्षको लागि, सामाजिक नेटवर्कले यसको प्रयोगको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई मोहर अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छ प्रमाणिकरण.
ब्राउजरले कसरी काम गर्दछ
इन्स्टग्राम अन्वेषक, पूरै प्लेटफर्म जस्तै। यो एल्गोरिथ्म अन्तर्गत काम गर्दछ, यसले ब्राउजरलाई प्रकाशनहरू बनाउँदछ जुन तपाईंको रूचि हो। इन्टग्रामले यो कसरी गर्छ? वास्तवमा, त्यस्तै, तपाईको रूचिको प्रकाशनहरू मात्र देखा पर्छन्। इन्स्टाग्राम कसको अनुसरणमा आधारित हुन्छ, ह्यासट्यागहरू तपाईंले प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंको स्थान र कुन प्रकारको प्रकाशनसँग तपाईं कुराकानी गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईं नयाँ खाता हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग छैन अनुयायीहरू, न त प्रकाशनहरू। इन्स्टाग्राम तपाईंलाई पोष्टहरू देखाउँदछ जुन तपाईंको स्थानसँग जान्छ। ब्राउजरमा तपाईंको रूचिको प्रकाशनहरू हुनको लागि, तपाईंले अन्य प्रयोगकर्ताहरू र प्रकाशनहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्दछ। यद्यपि कुनै पनि केसमा सबैभन्दा धेरै प्रकाशित हुने प्रकाशनहरू तपाईको स्थान भित्र सब भन्दा भाईरल हुन्छन्।
युक्तिहरू जुन तपाईलाई इन्स्टाग्रामको बारेमा थाहा थिएन
हामीले पहिले नै उल्लेख गरेका थियौं कि इन्स्टग्रामले वर्षको बखत विभिन्न अपडेटहरूमा यसको प्लेटफर्म विषयवस्तु दिन्छ। धेरै चोटि यी कारणले प्रयोगकर्ता हराउँछ र के गर्ने थाहा छैन। त्यस कारणले हामीले तपाईंको लागि केही उपयोगी युक्तिहरू देखाउने निर्णय गरेका छौं।
अर्को प्रयोगकर्ताको सूचनाहरू सक्रिय गर्नुहोस्
नयाँ इन्स्टाग्राम अपडेटहरू मध्ये एक प्रयोगकर्ताले सामयिक पोष्टलाई प्रायः मिस गर्दछ। यो हुनबाट रोक्नको लागि, अनुप्रयोगले अर्को प्रयोगकर्ताको प्रकाशन सूचनाहरू सक्रिय पार्ने विकल्प उपलब्ध गराएको छ। त्यसोभए तपाईंले कुनै पनि पोष्ट याद गर्नुहुन्न। यो गर्न तपाईले आफ्नो रूचिको प्रयोगकर्ताको प्रकाशन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक प्रकाशनको माथिल्लो दायाँ कुनामा तीन डटहरू सहित एक आईकन देखा पर्दछ, तिनीहरूलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि प्रकाशकहरूको सूचनाहरू सक्रिय पार्न विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
जस्तो कि तपाईं पनि आफ्नो प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ र माथिल्लो दायाँ कुनामा अवस्थित तीन पोइन्टहरूको आइकन दिनुहोस्। अधिसूचनाहरूमा थिच्नुहोस्। पछि दुई विकल्पहरू देखा पर्नेछ। एउटा प्रकाशनका लागि र एक कथाहरूको लागि। तिनीहरू मध्ये कुनैलाई पनि सक्रिय गर्न, तिनीहरूलाई पछाडि दायाँ पट्टी स्विच गर्नुहोस्।
तपाईंको खोज ईतिहास खाली गर्नुहोस्
ईन्स्टग्राम भित्र तपाईको खोज ईतिहास मेटाउन सम्भव छ। यो तपाइँको प्रोफाइल प्रवेश। त्यसो भए, माथि दायाँ कुनामा अवस्थित तीन-लाइन आइकनमा क्लिक गरेर र सेटि toहरूमा गएर, सेटिंग्स मेनूमा अन्तिम विकल्प। सुरक्षा विकल्पमा जानुहोस् र स्पष्ट खोज ईतिहास थिच्नुहोस्। जारी राख्न विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो हो।
हामी सबैलाई फोटोको साथ ट्याग गरिएको छ जुन हामीलाई इन्स्टग्राम भित्र मनपर्दैन। र त्यहाँबाट छुटकारा पाउनको लागि एक तरीका छ। त्यसो गर्नको लागि तपाईंले सेटिंग्स विकल्प प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। सेटिंग्समा जानुहोस् र त्यसपछि गोपनीयतामा। यस विकल्प भित्र सिधा लेबलमा जानुहोस् र त्यसपछि फोटो र भिडियो लुकाउनुहोस् लाई थिच्नुहोस्। र त्यसपछि फोटोहरू लुकाउनुहोस् जुन तपाईं लुक्न चाहानुहुन्छ।
पोष्टहरू एल्बममा बचत गर्नुहोस्
इन्स्टाग्रामले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई एल्बममा उनीहरूको कथाहरू बचत गर्ने विकल्प उपलब्ध गराएको केही समय भएको छ। अब यो सम्भव छ कि एल्बमहरू ती प्रकाशनहरू बचत गर्नुहोस् जुन तपाईंले बचत गर्नुभयो। यो नयाँ इन्स्टाग्राम कार्यक्षमता धेरै पिनटेरेस्ट बोर्डहरूको कार्य जस्तो देखिन्छ। तपाईं अरूको प्रकाशनहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ एल्बमहरू जुन केवल तपाईंले देख्नुहुनेछ।
यो गर्न तपाईले सेटिंग्समा जानुपर्नेछ र सेभमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि माथि दायाँ कुनामा अवस्थित आइकन थिच्नुहोस्। संग्रह वा एल्बमको नाम दिनुहोस्। अर्को प्रेस गर्नुहोस् र तपाईंले बचत गर्नुभएको फोटोहरू बीचमा चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो संग्रहमा चाहनुहुन्छ। त्यसपछि माथिल्लो दायाँ कुनामा आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं सक्नुभयो।
अभिलेख इन्स्टिग्राम भित्र कुनै नयाँ प्रकार्य छैन, यद्यपि यो धेरै उपयोगी छ। यो सुविधाले प्रयोगकर्ताहरूलाई ती इन्स्टाग्राम पोष्टहरूबाट मुक्त हुन अनुमति दिन्छ जुन उनीहरूलाई मनपर्दैन। तर यसले तिनीहरूलाई हटाउँदैन। यसका अतिरिक्त यसले उपयोगकर्तालाई फिडमा फिर्ता राख्न पनि अनुमति दिन्छ यदि केहि भएको छैन। इन्स्टाग्राम पोष्ट फाइल गर्नु धेरै सरल छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको तपाईंको प्रकाशनहरू मध्ये एक प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसको माथिल्लो दाहिने कुनामा रहेको तीन-डट आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि संग्रह गर्न विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईं एक प्रकाशन संग्रह गर्नुहुन्छ यो प्लेटफर्ममा अर्को स्थानबाट तपाईंलाई देखिने छ।
इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष सन्देशलाई कसरी जवाफ दिने
इन्स्टाग्राम प्लेटफर्म प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छ। यसको डिजाइन सबै उपयोगकर्ताहरूले बुझ्नका लागि बनाईएको हो। यस बाहेक यो एक साधारण तरीकाले संगठित गरिएको छ कि उपभोक्ताले सबै कुरा सजिलो तरीकामा फेला पार्दछ। प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम यो अपवाद छैन। जवाफ पठाउनुहोस्, कसरी पठाउने सन्देशहरू इन्स्टाग्राम लाइभबाट यो धेरै सरल छ। अर्को हामी तपाईंलाई सन्देशमा कसरी जवाफ दिने भनेर देखाउनेछौं।
इन्स्टाग्राम प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो नोट गर्नु पर्दछ कि इन्स्टाग्राम सिधा प्रवेश गर्ने एक मात्र तरीका इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगबाट हो। इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष अनुप्रयोग रद्द भएको थियो र प्लेटफर्म को आधिकारिक वेबसाइट धेरै सीमित छ। र यो सीधा सन्देश सेवा छैन।
तपाईको प्रयोगकर्ता नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्। इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई घर लैजान्छ। शीर्ष पट्टीमा तपाईले (बायाँ देखि दायाँ) क्यामेरा आइकन, इन्स्टाग्राम नाम, IGTV आइकन र अन्तमा, प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम प्रतिमा भेट्टाउनुहुनेछ। त्यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम डाइरेक्ट भित्र तपाईले एक शीर्ष बार देख्नुहुनेछ, तपाईको प्रयोगकर्ता नामको साथ, नयाँ सन्देश रेकर्ड र लेख्न विकल्प। यो पछि खोजी ईन्जिन हो। तल यी सबै सन्देशहरू हुन् जुन तपाईंसँग थिए, यदि ती मध्ये कुनै निलो वृत्त छ भने, तपाईंले सन्देशहरू देख्नुभएन।
कुराकानी प्रविष्ट गर्नुहोस् र सन्देश लेख्नुहोस्, अडियो, फोटो वा स्टीकर पठाउनुहोस्।